Hurumende yeGerman inowedzera mari kuchengetedza mhuka dzesango muTanzania
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Hurumende yeGerman inowedzera mari kuchengetedza mhuka dzesango muTanzania
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Mumiriri weGerman kuTanzania Regine Hess
MuTanzania yemazuva ano, nzvimbo dzakachengetedzwa musango uye kuchengetedza mhuka dzesango zvinoumba makumi maviri neshanu muzana yenzvimbo. 29 muzana yenyika yakaiswa parutivi kumapaki emunyika nenzvimbo dzekuchengetedza mhuka kuti vawane kunyanya kumaindasitiri evashanyi.
Hurumende yeGerman yakawedzera rutsigiro rwayo rwemari nehunyanzvi mukutsigira mhuka dzesango nekuchengetedza zvisikwa muTanzania kuburikidza nekudyidzana kwenyika mbiri pakati penyika mbiri dzekudyidzana mukusimudzira kushanya.
Ichicherekedza makore makumi matanhatu ekuzvimirira kwayo, Tanzania inoramba ichiwana rubatsiro rwemari kubva kuGerman kuchengetedza mapaki emhuka dzesango uye ari iwo anotungamira sosi yekushanya.
Semunhu anotungamira wekuchengetedza mhuka dzesango, hurumende yeGerman yakanga yasaina iyo Euro 25 miriyoni inokosha chibvumirano chekupa mari kusimudzira kwenzvimbo dzakachengetedzwa yeprojekti yezvisikwa muTanzania.
Tanzania National Parks yakataura muchirevo chayo chazvino kuti chibvumirano chakasainwa chichafukidza zvirongwa zvekuchengetedza muKatavi neMahale ecosystems muSouthern Highlands uye maWestern vashanyi matunhu eTanzania.
Iyo yekuchengetedza chirongwa ichafukidza zvakare iyo Serengeti Ecosystem Development Kuchengetedza Chirongwa (SEDCP II). Zvimwe zvezviitiko zvichaitwa muSerengeti zviri kusimbisa kuchengetedza zviwanikwa imomo.
Hurumende yeGerman yakazvipirawo kutsigira mapaki mashanu achangobva kugadzwa ekuchengetedza mhuka dzesango nekusimudzira mukushanya muTanzania neAfrica.
Munguva pfupi yapfuura, tarisiro yemubatanidzwa pakati peGerman neTanzania yanga iri pakuchengetedzwa kweMahale neKatavi National Parks nemukoto wadzo.
Serengeti National Park uye Selous Game Reserve akakosha uye anotungamira mapaki emhuka dzesango mu Africa pasi peGerman rutsigiro rwekuchengetedza.
Muna 1958 Prof. Grzimek nemwanakomana wavo Michael vakatanga zvidzidzo zvavo zvekutanga zvemhuka dzesango muSerengeti uye zvinyorwa zvavo "Serengeti Haife".
Serengeti ikozvino inzvimbo inozivikanwa inochengeterwa mhuka dzesango mu Africa.
Dale N Bickenbach anoti:
Svondo 20, 2021 pa 13: 41
Chinyorwa chakanyanya kunaka. Zvandakaita rwendo rweSerengeti ndakazviwana ndanyanya kufadzwa nekupayona kugadziridzwa kwesimba rezuva uye kudzoreredzwa pane kuona zvimwe zvipuka zvine hanya nebhizinesi razvo. Sezvo imba yekugara yakapayona mu Deutschland uye chirongwa chemuenzaniso chakavandudzwa muNorth America tariro yangu yanga iri yekuwedzera kubvisa kushandiswa kwemafuta muSerengeti, neTanzania nekubatanidza akanakisa ehunyanzvi hwazvino nekuchengetedza nharaunda inoenderana yezvinyama uye vashanyi vevanhu. Vanofarira vanofambidzana vangafarirwa. Ndatenda.